Februwari 23, 1993 amayunithi lempi kwakhiwa kusukela Popular Front izinsuku ezimbalwa nje ngaphambi kwalolo suku, kwenzeke Dushanbe mashi onesizotha. Ngakho-ke, izwe ubhekwa ukuthi lesi senzakalo saphawula ekuzalweni of the Army of the Republic of Tajikistan.
Umlando we-Armed Forces of Tajikistan
Naphezu kweqiniso lokuthi usuku lokuzalwa Tajik ibutho ubhekwa mhlaka-23 Febhuwari, kwase kunesiqiniseko esingokomthetho ngo-April 1994, futhi lasungulwa kwakulandelwa nobunzima kunalokho sina.
Iqiniso lokuthi ngemva kokuwa kweSoviet Union ukuze Tajikistan, ngokungafani nezinye amazwe ayengaphansi kweSoviet, abakutholanga lutho, ngenxa yokuthi kuncane noma akukho amayunithi sezempi kumi ku insimu yalo ngu ebuthweni laseSoviet. Nokho, kwakukhona 201-gatchinskaya elihamba division, kodwa ngaphansi isivumelwano uhulumeni wezwe ayizange ezifuywa eRussia, futhi uye wahlala e Dushanbe, kodwa wafakwa ngaphansi eMoscow oqondile. Таджикистана дислоцировались миротворческие силы СНГ . Kwaphela isikhathi eside ensimini ka Tajikistan efakwe yokugcinwa kokuthula amabutho ka CIS.
Isikhathi Nezinkinga ka nineties awuphasiswa ngu Tajikistan. Kukhona kulwiwa zaqala ukuhlasela, kwathi ngokuxhamazela amabutho ahlomile wawungathi amaqembu emthethweni ahlukene ifakwe izikhali kwakhiwa kuleli zwe, kunokuba impi njalo. ukweqa lempi sekuvame, kanye nokubuthelwa of Tajikistan iningi lentsha umane indiva.
Ngemva kwempi, okuyinto amangalelwe kuze kufinyelele 150,000 izimpilo, le ndaba buthule yahamba ngokushelela, abasiza ngayo indaba usizo wezempi WaseRussia. ibutho Tajikistan buye baba ngisho ebuthaka, kodwa ukwakheka impela ahlomile.
BC Place of Tajikistan kwamanye wamabutho emhlabeni
Ngokwe-Global Inkomba amabutho ezempi ngenxa 2017, okuyinto esikalini emazweni 133, Tajik ibutho wathatha 112 endaweni, ekubeni phakathi Cameroon (111 lithweswa) kanye Slovenia (113). Njengoba for nye Central Asia, ngaphambili yeSoviet Union, Uzbekistan wathatha indawo 48, Kazakhstan - 53, Kyrgyzstan - 109.
Kumele kuqashelwe ukuthi le Inkomba (Global firepower Inkomba) uyazicabangela izinto 50, okuyinto acabangele njengobunengi bemiphefumulo ezilungele ngalesi sikhathi ukuze sebuthweni, inani lemali wachitha kokuqukethwe kwayo emabhokisini emandleni amabutho izinhlobo amabutho ahlomile nokuningi ngaphezulu. Ngezinga ukuthi inake ngisho izibalo inzuzo kwemikhiqizo kawoyela kanye nesikhundla ezindawo ka isimo.
Imfundiso lempi Tajikistan
Okthoba 3, 2005 yiphalamende (Madzhlisom Oli) amukela le imfundiso lempi, okungathi, ngezindlela eziningi ziyawahlathulula esizayo yokuba ibutho Tajikistan.
Yaveza ukuthi Republic akacabangi kunoma yimaphi amazwe emhlabeni njengesitha futhi akekho umuntu noma yiziphi izimangalo indawo. Ngakho, esunguliwe ukuthi imfundiso lempi ngokuzivikela ngokuphelele indalo, futhi uma izinsongo zangaphandle CSTO ulindele ( "Tashkent Treaty").
Isakhiwo kanye nosayizi amabutho Tajikistan
Amabutho Tajikistan zihlanganisa umhlaba kanye ibutho ephathekayo, air force namabutho emoyeni ukuzivikela.
Amabutho phansi weRiphabhulikhi siqukethe esinenjini ababili kwathi omunye wezikhali lamabutho. It has amasosha acishe abe yizinkulungwane 7-10.
amabutho Mobile, okuyinto badalwa 2003, kukhona ukulwa elungele kakhulu futhi abandakanya ukushaya iqembu lamabutho nokukodwa ahlukene sokuzingela esinenjini lamabutho (ngokomthetho basonta ngamasosha ahamba). Battalion ezintathu kusukela amayunithi mobile zifakwe Amandla Ibuthelelo le CSTO ukuthunyelwa okusheshayo.
Air Force ezinkulungwaneni 1.5. Abantu futhi ukuzivikela Okwamanje benziwe uhlaka olulodwa, esakhiwa isigaba indiza, umsakazo ubunjiniyela Ibutho nokukodwa anti-aircraft missile ibutho.
Ngaphezu kwalokho, inani amayunithi sezempi, akulona amalungu amabutho nezisetshenziswa Wezokuvikela WeRiphabhulikhi YaseNingizimu Afrika, kukhona umngcele amasosha (ayizinkulungwane 1.5. Abantu) futhi Ministry Interior (ayizinkulungwane 3.8. Abantu).
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-data esekhadini inani ibutho Tajikistan ayalinganiselwa, njengoba lolu lwazi libhekwa, Defense of the Republic engakaze kudalulwe. B usetha inani lamasosha akuyona abantu abangaphezu kuka-6 amawaka Armed Forces of the Republic ke CIA simo ngokusekela amabutho ezempi.
Izikhali kanye nemishini
Tajik ibutho elingama uyibize ngokuthi yesimanje. Ngokuyisisekelo siqukethe imishini ekhiqizwa e-USSR. Izimoto armored anawo eMnyango Wezokuvikela weRiphabhulikhi at yilezi:
37 amathangi, zazo 30 - T-72, omunye - T-62;
IFVs - 23 izingcezu (BMP-1 - 8, i-BMP-2 - 15);
23 armored izisebenzi abathwali (APCs - 60/70/80).
eziyishumi D-30 howitzers 122mm;
ezintathu rocket izinhlelo "Grad" (BM-21);
eziyishumi izigqulo PM-38 120mm.
On Air Force has eyodwa TU-134 A, 12 Mi-24, izimoto Mi-nanye 8 futhi Mi-17 (esikhathini esidlule bebengamalungu 12 khona, kodwa ngo-2010 umshini olulodwa iphahlazeka). Kukholakala ukuthi le ndiza ukulwa e Tajikistan kuyinto Nokho, cha, webhomu amasu T-95 futhi ezintathu L-39 (ukuqeqeshwa ukulwa izimoto) ngo-2011 ezimbili nengxenye umbukiso wezempi. Nokho, akwaziwa ngokunembile, basonta Air Forces of Republic noma ziye yaqashiswa ezivela eRussia.
Ehlome ngamathuluzi okuthola emoyeni ukuzivikela uye amabili ezinezinjini S-75 "Dvina", nesikhombisa S-125 "Pechora", ngaphezu, kukhona isibalo esingavezwanga MANPADS Russian "Strela-2" futhi American FIM-92.
I kwezikhali kuyinto ngempela yisikhathi, kodwa 2017 Russian eMnyango Wezokuvikela unqume ukuphakela indiza Tajikistan, izikhali ezintsha kanye nezinhlamvu. Ngakho-ke, kumele kuciniswe umugqa ezikude ukuzivikela, ekuvimbeleni ukusakazeka izwe elise-Asia Ephakathi zobuphekula.
Bangaki sebuthweni of Tajikistan?
I-oda ebuthweni lezempi kulawulwa uMthetho "Ngo-Universal Military Duty futhi Military Service." Kodwa nge nokuqaliswa kwalo kuleli zwe kukhona izinkinga ezingathi sína: abantu abasebasha abasezingeni lokuya empini ezama ukubalekela inkonzo. Ngezindlela eziningi, lokhu kwandisa bachuma inkohlakalo phakathi abasebenzi DOD.
Umthetho oshiwo ngenhla icacisa ukuthi intsha bayakhuthazwa ukuthi ujoyine ibutho Tajikistan abaneminyaka 18 - 27 iminyaka. Bayoba sesabelo izinyanga 24. Ukuze abantu abaye waphothula ekolishi, ukuphila kuyinto 1 ngonyaka.
By the way, engu ilungelo ibhekane yonyaka inkonzo yezempi amanani abantu kungathi izinkulungwane 79, kodwa ukuze babe amasosha uphathe 79 kuphela izinkulungwane zentsha.
Namanje nophikelelayo Tajikistan kuyinto ngempela ezisindayo isimo sezombusazwe yangaphakathi. Ngo-September 2015 amabutho ukuphikiswa ngaphansi kobuholi wangaphambili Isekela Defense republic Abouhalima Nazarzoda ihlelwe nokuvukela ahlomile, inhloso okuyinto kunqunywa kokugumbuqelwa okulesi uMongameli Emomali Rahmon, osalokhu amandla ngo-1994.
Ukushuba kwesimo ne ukuphikiswa kwamphoqa uhulumeni emuva ngo-2000 saqedwa ngo Tajikistan inkonzo yezempi ngokuphelele ngaphansi inkontileka. Njengoba kungase kudale ezinye izingozi ngoba uhulumeni wamanje, uma ayenqaba la masosha umbuso ekhona, futhi ithuba ukuthonya ukubukwa zezombusazwe nozakwabo. Kule ndaba, Armed Forces of the Republic nhlobo Institute of sergeants okhokhelwayo.
Ukulungiselela yokuqeqeshwa isikhulu esizayo Tajikistan waziphatha izikhungo ezimbili zemfundo: Military Institute kanye Lyceum ka eMnyango Wezokuvikela. Nokho, izinga lemfundo kushiya okuningi okufanele oyifunayo, ngakho izikhulu ngokuyisisekelo ngawo abaqeqeshiwe izikhungo zemfundo ye eRussia, eKazakhstan, iChina neNdiya. Ngaphezu kwalokho, kuleli zwe eduze Dushanbe ukuqeqeshwa isikhungo-United States, lapho tisebenti yebutho Tajikistan ingase futhi ukuqeqeshwa ngokwengeziwe.
Army yesondlo impahla
Income futhi bengenazo nezindlu zangasese amabutho Tajikistan kuyinto ezingeni eliphansi kakhulu. Ngokuvamile ababuthiwe ziphoqelelwa ukuba ziphile emabhalekisini emabhalekisini, ngisho abangenalo bafudumale. Ukudla enikeziwe eziningi enganele, yingakho ukweba luyachuma ibutho.
ukuthunga iyunifomu yamasosha, ezimweni eziningi, ngisho imodeli Soviet, ikhishwa kanye phakathi naso sonke isikhathi senkonzo. I amasethi yesibili futhi okwalandela isosha kufanele bathole izimali siqu.
Isici esiyinhloko ukuzinza
Isici esiyinhloko ekuqinisekiseni ukuzinza e Tajikistan is kakade ngenhla Russian base 201st eMnyango Wezokuvikela.
Ngo-2013, isivumelwano yathinteka ophakathi kwala mazwe womabili ukuthi ezempi Russian uzohlala kuleli zwe kuze 2042. Ngakho, i-Russia kuqinisekisa ukuvikeleka okuhle emngceleni ne-Afghanistan, futhi Tajikistan yathenjiswa sina ukuthenga izikhali zanamuhla, kanye ilungelo ukuqeqeshwa ongoti lempi ezikhungweni zemfundo ye Russian Federation eMnyango Wezokuvikela.
amayunithi Base zitholakala emadolobheni amathathu yezwe: Kurgan-Tube, Kulyab futhi Dushanbe. It yakhiwa armored, izingxenye ezinezinjini division amabutho ubunjiniyela nokuxhumana inkampani lokudutshulwa, anti-aircraft missile Ibutho nokuhlukanisa eyayimfuqa ART amayunithi. Ngaphezu kwalokho, emzini Nurek kuyinto ukulawula Uma uwubuka usemkhathini, ongaphansi VKS Russia.
Ekugcinweni kokuthula e-Republic of Tajikistan umsebenzi obalulekile-Russia, njengoba isimo engazinzile emingceleni ye Russian Federation kunosongo ngqo ukuze kuvikelwe izwe. Ngokuqondene nalokhu update Sun Tajikistan, okwandisa ukulwa kwabo ukulungela ikhono yokulwisana izinsongo kunokwenzeka kusukela e-Afghanistan njengoba amaqembu Islamist amaphekula ngoba eMoscow kubhekwa omunye nezindaba kuqala. Ngakho-ke, izinhlelo waseRussia ukutshala izimali zami kule Tajik ibutho abangaba yizigidi ezingu-200 aseMelika. Yesimanje izobanjelwa izigaba ezintathu, futhi uqede ngo-2025.
Kufanele kuqashelwe ukuthi nasekuqiniseni amabutho kazwelonke ahlomile ikakhulukazi nesithakazelo uhulumeni wamanje yezwe, njengoba ngaphezu izinkinga ne-Afghanistan, kuleli zwe kungukuthi ixazululwe ngokugcwele, futhi ezindabeni zezombusazwe yasekhaya ehambisana ne-ukuphikiswa Islamists olukhulu. Lesi simo kubangela Dushanbe kokusebenzayo nokubambisana sokulwa eRussia kanye amazwe angamalunga CSTO.
Kuze kube yimanje, Tajik ibutho nje wehluleka ukubhekana bebodwa nge ibe usongo olukhulu. Ngakho-ke 201st RMB uhlala lamabutho eyinhloko WaseRussia e Central Asia, kanye yisiboniso ukuthula wasemuva eyinhloko sovereignty nokuzimela weRiphabhulikhi.
Yikuphi cartridges hare ukuthatha nawe ku ekuzingeleni?
Inani labantu base-Lithuania: ubukhulu kanye nokusungulwa
Ungakhumbula kanjani ngokushesha ulwazi? Ukuqeqeshwa kwememori
Indatshana enesihloko esithi "Kimi, nasezweni lokuzalwa - kuyinto ...", noma njengengxenye inkulumo enhle mayelana komuzi wakubo awuthandayo?
Imodeli yokusungula management: ukhetho best
"Wagcoba phakathi kwemilenze yakho. Yini okufanele ngiyenze?" amathiphu amateur